Ny gara Paris Gare du Nord dia nafindra toerana noho ny fandrahonana baomba
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Ny gara Paris Gare du Nord dia nafindra toerana noho ny fandrahonana baomba
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny gara Paris Gare du Nord dia nafindra toerana noho ny fandrahonana baomba.
Ny gara, iray amin'ireo lehibe indrindra any Paris, dia mandray ny fiaran-dalamby Eurostar avy any Londres ary manompo ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle.
Gare du Nord dia manana gara dia nafindra noho ny entana tsy voakarakara.
Mpandeha an-jatony no voatery niandry teo ivelan'ny gara ny alarobia taorian'ny baikon'ny polisy mba hialana.
Nilaza ny vondrona metro Paris fa tokony hitohy amin'ny 5 ora hariva ny fifamoivoizana eo an-toerana (3pm GMT).
Olona an-jatony no voatery niandry teny ivelany Gare du Nord gara ao afovoany Paris Androany taorian'ny nanomezan'ny polisy ny fandroahana azy ireo, raha mbola nanao fanadihadiana ireo andiana baomba ireo izay heverina fa entana tsy voakarakara.
The Gare du Nord, Paris-Nord ofisialy, iray amin'ireo fiantsonan'ny gara lehibe enina lehibe ao Paris, dia nesorina noho ny mety ho fandrahonana baomba ary naato ny fiaran-dalamby avy ao amin'ny terminal.
Ny Transport Express Regional (TER) dia nibitsika fa tapaka ny fitaterana avy amin'ny gara, raha ny orinasa mitantana ny Metro Paris kosa dia nilaza fa tsy mandeha amin'ny lalana roa ny fiaran-dalamby eo anelanelan'i Paris Gare de Lyon sy Paris Nord.
Nilaza ny vondrona metro ao Paris fa tokony hitohy amin'ny 5 ora hariva ny fifamoivoizana eo an-toerana (3pm GMT) ary nanamafy fa misy ifandraisany amin'ny entana tsy voakarakara ny zava-nitranga.
Ny gara, iray amin'ireo ParisNy lehibe indrindra dia mandray ny fiaran-dalamby Eurostar avy any Londres ary manompo ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle.
Mampiseho vahoaka marobe miandry eny amin'ny araben'ny boriborintany faha-10 ao Paris ny sary sy sary avy any ivelan'ny gara. Ny sasany tao amin'ny Twitter dia nanamafy fa tonga tao amin'ny toby ny andiana baomba.